January 8, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'January 8th, 2017'
Nin Reer Falastiin ah oo Gaari Xamuul ah ku Weeraray Askar Israa’ili ah (VIDEO)
January 08, 2017 – Wararka inaga soo gaaraya dakdalka Isra´iil gaar ahaan deegaanka loo dalxiis tago ee Armon Hanatziv Promenade ayaa waxa ay sheegayaan in Nin watay gaari weyn oo Wiish ah uu jiir siiyay dad fara badan . Dhimashada weearkaan ayaa ilaa iminka waxaa la xaqiijiyay 4-qofood halka dhaawaca uu ka gaarayo 13-qofood oo …
Ciidamo ku sugan Magaalada Baydhabo oo Maanta Xukunno kala Duwan lagu Riday (SAWIRRO)
January 08, 2017 – Maxkmadda Ciidamada Qalabka Sida ee Gobolka Baay ayaa maanta waxa ay xukunno ku riday Saddex Askari oo labo ka mid ah ay ka tirsan yihiin Ciidanka Koonfur Galbeed, halka Askariga kalana uu uu ka tirsan yahay Ciidanka Badda ee dowladda Federaalka Soomaaliya. Askartan ayaa Labo ka mid ah waxaa lagu eedeeyay …
Weerarakii Gaariga ee Dalka Israa’il (VDEO)
Dhimashada weerarkaan ayaa ilaa iminka waxaa la xaqiijiyay 4-qofood halka dhaawaca uu ka gaarayo 13-qofood oo qaarkood qaba dhaawacyo culus . Ninkii sida ula kaca ah dadka u jiirsiiyay gaariga Wiishka ah ayaa isna la toogtay. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Ilaa hada ma jirto cid ama qolo sheegatay weeararkaan loo adeegsaday gaariga weyn …
Ciidamada Dowladda oo soo Bandhigay Mooto iyo Qaraxyo ay ku Qabteen Degmeda Afgooye (VIDEO)
January 08, 2017 – Ciidanka Nabad Sugida qaranka ee ka howlgala degmeda Afgooye ayaa degmadaasi Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ku soo qabtay Mooto ay saarnaayeen sadex nin oo sitay walxaha qarxa. Mootadan oo ahayd nooca yar yarta ah ee loo yaqaano Dhugdhugleyda, ayaa waxaa saarnaa walxaha Qarxa oo ay ka mid ahaayeen Jaakado ay …
Xildhibaano Maanta Mooshin Xil ka Qaadis ah ka Gudbiyay Madaxweynaha Galmudug (Dhagayso)
January 08, 2017 – Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa waxa ay maanta Mooshin xil ka qaadis ah ka gudbiyeen Madaxweynaha Maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed. Kulan ay Maanta xildhibaanadani ku yeesheen Magaalada Cadaado ayaa xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug waxa ay sheegeen in ay Mooshin xil ka qaadis ah ay ka gudbiyeen Madaxweynaha Galmudug. Xildhibaanada Baarlamaanka …
Ragii Afgooye Lagu soo Qabtay (VIDEO)
Mootadan oo ahayd nooca yar yarta ah ee loo yaqaano Dhugdhugleyda, ayaa waxaa saarnaa walxaha Qarxa oo ay ka mid ahaayeen Jaakado ay Qaraxyo ku xiranyihiin oo ah kuwa ay adeegsadaan dadka is qarxinaya. Saraakiisha ciidamada NISA ayaa Warbaahinta dowladda u sheegay in weli gacanta lagu hayo Mootadii iyo ragii la socday, waxa ayna sidoo …
DAAWO: Hadal si Qarsoodi ah Looga Duubay Dublimaasi Israa´iili ah oo Faraha la galay Siyaasadda Ingariiska (VIDEO)
January 08, 2017 – Waxaa soo if baxay hadal si qarsoodi ah looga duubay diblumaasi u dhashay dalka Israa’il kaas oo la sheegay inuu ka tirsanyahay safaaradda israa’il ee magaalada London. Hadaba Safiirka dalka Israa’iil u fadhiya magaalada London ayaa raali gelin bixiyay hadalkii ka soo yeeray diblumaasi ka hawlgala safaaradda uu madaxda ka yahay, …
Xildhibaanada u Tartamaya Gudoonka Baarlamaanka oo maanta Qudbado ka Hor Jeedinaya Xildhibaanada
January 08, 2017 – Xildhibaanada u tartamaya xilka guddoonka baarlamaanka federaalka ayaa maanta ka hor jeediyaan xildhibaanada golaha shacabka khudbado ay kaga hadlayaan waxqabadka ay la imaanayaan haddii loodoorto xilka ay u tartamayaan. Sida lagu wado, xildhibaanada u taagan xilka guddoonka baarlamaanka ayaa maanta soo bandhigaya waxqabadkooda, waxaana xigi doono xildhibaanada u taagan xilka guddoomiye …
Waraysigii Sheekh Cali Dheere (VIDEO)
Cali dheere ayaa wariyaha waraysigani ku siiyaya deegaano hoostaga magaalada Jowhar oo ay ku suganyihiin dagaalyahanno ka amarqaata ururka Al Shabaab. Waraysigii 1-aad Wariyihii waraysiga ka soo qaaday afhayeenka Al Shabaab ayaa waxaa markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa qabtay oo xiray ciidamada dowladda, iyadoo markii danbe la sii daayay.
Hadalkii Sida Qarsoodiga loo Duubay (VIDEO)
Hadaba Safiirka dalka Israa’iil u fadhiya magaalada London ayaa raali gelin bixiyay hadalkii ka soo yeeray diblumaasi ka hawlgala safaaradda uu madaxda ka yahay, kaddib markii la duubay qayb ka mid ah howlwadeenadiisa oo leh waxaan jeclaan lahaa inaan meesha ka saaro ama sumcadda ka dilo qaar ka mid ah xildhibaanada dalka Britain, oo uu …